Nagarik News - समुद्र नांगै देखिन्छ
मान्छेहरू समुद्रसँग जिस्किन औधी मन पराउँछन्। बटारिएर आउने छालसँग तिनलाई कुनै डर छैन। त्यसको उत्ताल छालले मान्छेको शरीरलाई लछार्दै आफूमा समाहित गराउने दृश्य जति चित्ताकर्षक छ उति नै भयंकर पनि लाग्छ मलाई। भारतको गोवास्थित 'सिन्क्वेरिम बिच' मध्याह्नदेखि नै भरिभराउ छ। एउटा ठूलो भीड सिन्क्वेरिम बिचमा समुद्रको लहरमा आफूलाई हेलिरहेका छन्, बेपर्वाह। रूपमा नग्न, अर्धनग्न वा खोलयुक्त जे भए पनि सारमा सबै नै जिन्दगी केहीबेरका निम्ति भुल्न चाहन्छन्। सिन्क्वेरिम, कालांगुट, बागालगायतका बिचको स्पर्शबाट प्राप्त कोलाज अनुभूतिबाट त्यही पाठ सिकेको छु मैले।
समुद्र मान्छेलाई जिन्दगी पढाइरहेको छ। मान्छेहरू समुद्रसँग एकाकार भएर जिन्दगी सिकिरहेका छन्। म भने पानीदेखि डराउने मान्छे। एकप्रकारको 'हाइड्रोफोबिया' छ मलाई। समुद्रको मज्जा लिन भनी यो दूरस्थ प्रदेशमा आएको छु। म कसरी यो प्रिय प्रकृतिसँग नहेलिई त्यसै फर्केर नेपाल जान सकुँला! म घुँडासम्म भिज्न आफूलाई मानसिकरूपले तयार पार्छु। त्यसभन्दा पर पुग्ने साहस छैन मेरो। समुद्रको मज्जा लिन गएको म, मेरो पोशाक देखेर कतिपय मान्छे अचम्म मानेर हेरिरहेको जस्तो लाग्छ। घुँडामुनिसम्म आउने हाफ पाइन्ट र टिसर्टमा छु म। प्रायः मानिस, जो समुद्रसँग एकाकार भइरहेका छन् ती मेरोभन्दा निकै कम लुगामा छन्। के समुद्रलाई नग्नता मन पर्छ?
'पाइन्ट उपर खिँच, किसको दिखा रही हो?' मेरो छेउमा रहेको एक भारतीय युवाले आफ्नी पत्नीलाई आदेश दियो। आदेश दिइरहँदा उसका आँखा भने बिकिनीमा सजिएकी निकटतम एक विदेशी गोरीतिर तन्किरहेका स्पष्ट देखिन्थे। ती युवतीको पाइन्ट तिनको नाइटोको थोरैमात्र तल पुगेको थियो। कुनै आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। पतिको आदेशलाई शिरोपर गर्दै तिनले आफ्नो पाइन्ट माथितिर तानिन्। तर, पाइन्ट माथि जान मानिरहेको थिएन। उनको हातमा केही महिनाको बच्चा थियो। त्यो बच्चा बोक्न युवा तयार थिएन सायद। उखरमाउलो गर्मीमा समुद्री तटमा रहेकी उनले निधारको पसिना पुछिन्। उनीतिर उत्सुकताको नजरले हेर्ने सायद ममात्र थिएँ। कसलाई कसको के मतलब? मलाई पनि के मतलब! तर, जिन्दगीको पाठ पढ्न आएका मान्छेमध्ये कोहीकोही पात्र आफ्नी पत्नीलाई अरुले हेर्लान् भन्ने चिन्तामा हुँदा रहेछन्! अचम्म लाग्यो। सोही कारण मेरा आँखा अन्त कतै भए पनि कान भने तिनै भारतीय जोडीको संवादमा अडिएको थियो।
पानी खेल (वाटर स्पोर्ट्स) चलिरहेको थियो। तर, मजस्ता पानीसँग डराउनेका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त खेल केवल डुंगा चढेर परसम्म जानु थियो। मैले डुंगा चढ्नका निम्ति आफूलाई तयार पारेँ र अढाई सयको टिकट किनेँ। १५ जना अट्ने सोही डुंगामा थिइन् तिनै युवती, जो आफ्नो पतिको आदेशले नाइटो छोप्ने प्रयत्न गर्दै थिइन्। समुद्र किनारदेखि निकै पर पुर्यागयो त्यस डुंगाले, मलाई जिन्दगीको मझधारमा पुगेको अनुभूति भयो। त्यसले १५ मिनेटजति समुद्रमा घुमायो हामीलाई। मेरा उमेरका अरु पनि जोडी थिए त्यहाँ। हावा चलेका कारण डुंगा हल्लिरहेको थियो। मलाई आफ्नो जिन्दगी पनि हल्लिरहेको अर्थात् एकतमासले नचलेको महसुस भइरहेको थियो। डुंगाबाट ओर्लंदा झन्डै कम्मरसम्म आउने पानीमै थियौँ हामी।
एक जना मस्ताना (देख्दा भद्र लाग्ने)ले अचानक आफ्नी पत्नीलाई अँगालोमा बाँधेर पानीमा डुबाइदिए। यस्तो लाग्थ्यो, उनी समाज तथा परिवारका कारण पत्नीसँग त्यसरी छिल्लिन कहिल्यै पाएका थिएनन्। त्यहाँ तिनको समाज थिएन, परिवार पनि थिएन। महिला पतिलाई छल्दै भाग्न खोजिरहेकी थिइन्। विचरी सोझी महिला, पतिको आक्रमणको सिकार बनिहालिन्। उनको धोती पानीको शक्तिशाली लहरले माथितिर तान्न थाल्यो र अन्त्यमा त्यो फुस्कियो। तर, उनको लाज पानीले केहीबेर जोगाइदियो। केहीबेरमा लहर उनलाई छाडेर अधिक पानी भएतिरै लाग्यो। पति छेउमा बसेर खित्का छोडेर हाँसिरहेका थिए भने महिला लाजले भुतुक्कै भएकी थिइन्।
अप्रिलको अन्तिम दिन मोबाइलको 'वेदर एप्स'ले ३८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम देखाइरहेको थियो। अप्रिल–मे पानी पर्ने महिना हो। तर, विश्वचर्चित गायक स्टेभी वन्डरको लोकप्रिय गीत 'आई जस्ट कल्ड टु से आई लभ यु'को दोस्रो अन्तरामा रहेको एक पंक्तिजस्तै 'नो अप्रिल रेन'को अवस्था थियो समुद्रवरपर। साँच्चै मुसलधारे वर्षा हुँदा समुद्रको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ होला? पूरा हुन मुस्किल मेरो उत्सुकता चुलियो।
बिकिनीकी गोरी बालुवामा लम्पसार परिरहेकी थिइन्। उनकै छेउमा भारतीय एक अर्धबैँसे महिला साडी, चोलो र चप्पलसहित उसैगरी बालुवामा लडिरहेकी थिइन्। तिनलाई आफ्ना कपडा गह्रुँगा लागिरहेका थिए। घुँडाभन्दा माथि पानी नपार्ने विचारले म किनारमा उभिइरहेको थिएँ, तर केहीबेरमा एउटा लहर यसरी आयो, मेरो छाती पूरै भिजाएर बिलायो। म उभिएको समुद्री बालुवाको जमिन त्यो लहरले पूरै हल्लाएर गयो। म निथ्रुक्कै भएँ। सोही दिन दाह्री काटेको अनुहारमा नुनिलो पानी पर्नाले चहराउन थाल्यो।
बालुवामा पल्टिरहेकी गोरीको बिकिनीबाट चियाइरहेका तिनका अंगहरूलाई त्यही छालले छोपिदियो। तिनको छर्लंगै देखिएका अंग केहीबेरका निम्ति हराए। गोरी आफ्ना उन्नत नितम्ब घाममा सेकाउनतिर लागिन्। उता, साडी–चोलोमा रहेकी अर्धबैँसेको कपडा भने आफूसँगै सोहोरेर लान खोज्यो लहरले। यस्तो लाग्थ्यो, समुद्र ती भारतीय अर्धबैँसेलाई केही खुल्न सिकाइरहेको थियो भने गोरीलाई अलि बन्द गर्न आदेश दिइरहेको थियो। अनि मलाईचाहिँ आफ्नो नजिक आउन निमन्त्रणा गर्दै थियो।
फेरि आयो अर्को लहर, उक्त लहरले ती दुवैजनालाई केही पर घिसारेर लग्यो। तिनीहरू बेस्सरी कराए, तर आनन्दमा, उत्तेजित हुँदै। यस पटक भने म पूरै भिजिसकेको थिएँ। नुनिलो पानीले मलाई निथु्रक्कै पारिदिएको थियो। अनुहारमात्र होइन, टाउकोसमेत भिजेको थियो।
सूर्य समुद्रमा डुब्ने प्रयास गरिरहेको थियो। सूर्य क्रमशः रातो डल्लो बन्दै गइरहेको थियो। त्यसको तापक्रममा गिरावट आइरहेको थियो। बालुवा विस्तारै सेलाउँदै गएकाले मान्छेहरू खाली खुट्टा त्यसमा टेक्न सक्ने बन्दै गएका थिए। समुद्र किनारमा दर्शनार्थीको भीड बढ्दो थियो। सहयात्री नवीन र दीपेन्द्र भर्खरै 'सी एड्भेन्चर' सकेर आएका थिए। नवीन प्यारासुटको मस्ती लुटेर आएको थियो भने दीपेन्द्र मान्छे डुबाउने गहिराइको छालमा पौडी खेलेर। 'बालुवाको तातोमा तपाईंले ढाड केहीबेर राख्नु भयो भने दुःखाइ कम हुन्छ,' तिनले मलाई सल्लाह दिए। म पनि के कम, सहयात्रीको सल्लाह मान्ने सुरसारमा लागेँ। मन्द तातोको स्पर्शले साँच्चै नै दुःखाइ कम भएको जस्तो अनुभूति भयो।
साँझ छिप्पिँदै थियो, समुद्री तट जोडाजोडीले भरिभराउ बन्ने क्रममा थियो। मजस्ता बिजोडी भने अब बाटो लाग्नु पर्ला भन्ने मनोविज्ञानमा थिए। तर, मलाई भने साँझको समुद्र हेर्ने लोभले ग्रस्त पारिरहेको थियो।
छाल मान्छे खोज्दै किनारको छेउसम्म आइरहेको थियो। छालको आयतन विस्तारै मधुरो देखिन थालेको थियो। समुद्र क्रमशः कालो बन्दै जाँदै थियो। लाग्छ, उज्यालोमा नांगो देखिने समुद्र रात पर्दै गएपछि लुगा लगाउँछ! लुगा लगाएको समुद्र देख्न सकिन्न। अब छाल होइन, त्यसको सुमधुर आवाजमात्र मान्छेसम्म आउन थालेको थियो। म त्यो आवाजले मुग्ध बनिरहेको थिएँ। बिकिनी पनि बोझ लागेर फाल्नेको संख्या बढिरहेको थियो। मान्छे एक पटक पुनः अबोध बालक बन्ने प्रयासमा थिए। तिनीहरूको नग्नताप्रेमले त्यही बताउँथ्यो। साँच्चै कहाँ गइन् होला ती साडी–चोलोमा समुद्रमा हेलिने अर्धबैँसे? अनि ती पति–पत्नी?
समुद्रको अनुहार कालो–निलो बन्दै गइरहेको थियो। म विस्तारै छाललाई छल्दै परपर भागिरहेको थिएँ। केही बेरअघि हेलिएको छाल अहिले डरलाग्दो बनेको छ। मलाई अँध्यारोमा पानीको छेउ पर्न पनि डर लाग्न थालेको छ। तर, कैयौँ मान्छे (प्रायः जोडी) छाल आएतर्फ अघि बढिरहेका थिए। तिनलाई किन डर नलागेको होला? के यो डर मेरा निम्तिमात्र आविष्कार भएको हो? कि यो डर प्रेममा परेका मानवका निम्ति झिनोमसिनो कुरा हो?
समुद्रको छालले अर्धनग्नहरूको लाज बेलाबेलामा छोपिदिएकै थियो। अहिले नग्नहरूकै लाज पनि अँध्यारोले पूरै जोगाइदिएको छ।
धेरै रहर छोडेर गयो
धेरै सोच्थ्यो, थोरै लेख्थ्यो। जति लेख्थ्यो, मिठो लेख्थ्यो। थोरै बोल्थ्यो, धेरै सुन्थ्यो। थोरै थिए उसका मन मिल्ने साथीहरू। जति थिए, उनीहरूसँग आत्मीयता थियो। हुलबाट पर रहन्थ्यो। जमातबाट अलग बस्थ्यो। भिन्न...
अघिल्लो दशकको दस्तावेज
रामेश कोइरालाले ‘आमाको मुटु' लेखेर मुटुभित्रका आरोह–अवरोहलाई शब्दमा उनेका थिए। यसपटक भने समाजको एक हृदयविदारक अनि दुःखद आयामलाई औपन्यासिक कृतिमा बटुलेका छन्।
असोज महिना उकालो लाग्दो । शरद् ऋतुको सफेद आकास । नाकाबन्दिले सुनसान पारेको सडक । सप्ताह अन्तमा साइकलको प्यास मेटाउन आतुर तन्नेरीहरु। कोहि समूहमा । कोहि एक्लै । पाउदान घुमाउदै...
साउन शिवजीको महिना। साउनमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका शिवालयमा दर्शनार्थीको भीड लाग्छ। नेपालमा थुप्रै शिवालय छन्। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख शिवालयहरूमा पशुपतिनाथ, डोलेश्वर, त्रिपुरेश्वर, गोकर्णेश्वर, सन्तानेश्वर, आशापुरेश्वर आदि हुन्। काठमाडौंबाहिर काभ्रेको...
पोखरा- राजधानी उपत्यकासँग पोखरालाई जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको शून्य किलोमिटर जहाँ छ त्यहाँ केही वर्षअघिसम्म पृथ्वीनारायण शाहको सालिक थियो। थुप्रै स्वदेशी पर्यटक आफू पोखरा आएको सम्झना साँचिराख्न सालिकअगाडि फोटो खिच्थे। सालिक...
'ह्या! आज फेरि सुक्या सागमा पानीरोटी पकायो। म त खाँदै खान्न।'थालमा आमाले पस्किदिएको पानीरोटी देखेर रोहन रिसाउँदै भुतभुतायो।'चामल हुनुपर्योि नि, भात पकाउनलाई। यही त खान नपाउने भइसक्यो। खुरुक्क नखाईकन,' आमाले...
कुकुरले घुस खाँदैन
कुकुरलाई कुतीकुती बिरालोलाई सुरीतिम्रो हाम्रो मायाप्रीति दोबाटोमा कुरीरेसम फिरिरी...ह्वाङह्वाङ गाउँटोलमा कुकुर रातभरि कराउँछन्, सुत्नै दिँदैनन्। दिनभर काम गरेर राम्ररी सुत्न पाइएन भने कस्तो हाल हुन्छ मान्छेको!